Vondrona Eoropeanina : Miaiky amin’ny fananan’ny Filoham-pirenena fisokafana -
AccueilRaharaham-pirenenaVondrona Eoropeanina : Miaiky amin’ny fananan’ny Filoham-pirenena fisokafana
Araka ny efa fantatra, dia nifarana ny fe-potoam-piasan’ny ambasadaoron’ny vondrona Eoropeanina, Benedito Sanchez, teto Madagasikara. Marihina fa ny taona 2014 izy no tonga teto amin’ny firenena ary niasa nandritra ny efa-taona.
Noho izay indrindra, taorian’ny fanaovam-beloma nataony tamin’ny Filoham-pirenena teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, dia niara-nidinidinika ho fanaovam-beloma tamin’ny mpanao gazety ihany koa ity ambasadaoron’ny vondrona Eoropeanina ity.
Tamin’izany indrindra no nilazany fa manana fisokafana teo amin’ny sehatra maro ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Nanambara mantsy ity ambasadaoro ity fa maro ireo dinika nifanaovany tamin’ny Filoham-pirenena, ary tsapa tamin’izany ny fisokafana nasehony. Anisan’izay, hoy ny filazany ny fahatanterahan’ny dinika politika indroa isan-taona niarahan’ny Fitondram-panjakana tamin’ny delegasion’ny Vondrona Eoropeanina, izay tsy tokony hijanona mihitsy fa tohizana hatrany.
Notsindriany tamin’izany ihany koa ny fisokafan’ny Filoham-pirenena teo amin’ny lafin’ny fotodrafitrasa. Nomarihin’i Benedito Sanchez fa raha ny mahakasika ny fanamboarana ny lalana mankeny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, ny Vondrona Eoropeanina no tokony nanatanteraka sy nandray an-tanana azy, taty aoriana dia noraisin’ny mpandraharaha sinoa izany. Toraka izany koa hoy izy, ny Lalam-pirenena RN5a, mampitohy an’Ambilobe sy Vohemar, mpandraharaha sinoa ihany koa no mandray an-tanana izany raha ny vondrona Eoropeanina no nanao ny kajikajy sy ny vinan’ny fanamboarana azy, sns.
Izany rehetra izany, hoy hatrany ity ambasadaoro ity, dia taratry ny fisokafana avokoa satria afaka misafidy malalaka amin’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny fanatanterahana tetikasa fampandrosoana ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Ny vondrona Eoropeanina ihany koa dia miaiky ny fahataran’ny famoaham-bola amina tetikasa ho amin’ny fotodrafitrasa. Voalaza mantsy fa anisan’ny sarotra ny famoaham-bola eo amin’ny fotodrafitrasa momba ny lalana. “Tsy vola kely fa volabe no tsy maintsy havoaka raha vao miresaka lalana isika. Manana ny fombafomba amin’ny famoaham-bola anefa ny vondrona Eoropeanina ary izay no mety miteraka ilay fahatarana. Eo ihany koa ny tsy fisian’ny fanohizana ny raharaham-panjakana. Ka noho izany, rariny loatra raha tsy mahandry ny Fitondrana ka miova mpiara-miombon’antoka afaka mandray an-tanana haingana ilay tetikasa”, hoy i Benedito Sanchez.
Na izany aza, hoy hatrany izy dia manaja ny fanapahan-kevitry ny firenena hatrany ny Vondrona Eoropeanina.
Tsiahivina fa mitentina 518 tapitrisa Euros ny 11è FED na ny « Fond Européen de Développement » ho an’i Madagasikara nanomboka 2014 hatramin’ny 2020, izany hoe, ao anatin’ny enin-taona. Mitsinjara ho toa izao kosa izany: 230 tapitrisa Euros, natokana ho amin’ny fotodrafitrasa sy ho fanohanana ny fampandrosoana ara-toekarena, 147 tapitrisa Euros ho amin’ny fitantanana sy fanamafisana ny politikam-panjakana, 130 tapitrisa Euros ho amin’ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, 8 tapitrisa Euros ho fanohanana ny fiarahamonim-pirenena, ary 3 tapitrisa Euros ho fanohanana ny asan’ny “ordonnateur national”.
Ankoatra izay, teratany italianina, Giovanni Di Girolamo no ambasadaoron’ny vondrona Eoropeanina hisolo toerana an’i Benedito Sanchez, izay hiasa any Mozambika indray.
Nanatanteraka iraka manokana teto Madagasikara ny solontena avy amin’ny sampan-draharaha eo anivon’ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena (FMI), izay tarihin’ny tompon’andraikitra voalohan’ny iraka, Marshall Mills, ny 7-21 septambra. Tamin’izany indrindra no nanaovan’izy ireo fanadihadiana sy niresahana mikasika ny ...Tohiny